I-Curcuma iyisici esithandwayo esiyingqayizivele sombala ophuzi. Kodwa ayisetshenziselwa ukupheka kuphela, kodwa futhi ku-cosmetology nemithi yomuntu. I-turmeric evame ukusetshenziswa kakhulu ngobisi. Leli thuluzi linempahla eminingi ewusizo.
Izakhiwo eziwusizo ze-turmeric ngobisi
Ukusetshenziswa ubisi nge-turmeric kukhulu kakhulu. Kuzosiza ukuphulukisa:
Leli thuluzi lizosusa ukuvuvukala futhi likhulule ngisho nobuhlungu obukhulu emathanjeni nasemalungeni. Inesenzo sokulwa ne-antioxidant, i-hemostatic ne-disinfecting. Izakhiwo eziwusizo ze-turmeric nobisi yilo:
yenza isikhumba siphelele, siphelele futhi sinwebeka;
kususa izinto eziyingozi emzimbeni;
kuqeda ukucasuka nokubomvu;
kuqeda ukuhuda kanye nezinye izinkinga ngesistimu yokugaya ukudla;
kunciphisa ukucindezelwa kwegazi;
kuncishisa izimpawu zokugula komqondo okuhlobene nobudala.
Uma uphuza ubisi nsuku zonke ne-turmeric ubusuku, ungasheshisa isisombululo. Ngenxa yalokhu, isisindo esingeqile sizohamba futhi i-cellulite izobonakala ingabonakali.
Indlela yokwenza ubisi lwe-thrapeutic nge-turmeric?
Ukuze usebenzise izinhloso zokwelapha i-turmeric ngobisi, kungcono ukusebenzisa iresiphi ephumelelayo yokulungiselela lo mkhiqizo.
I-turmeric ngobisi nopelepele
i-turmeric powder - ingxenye yesine yengilazi;
umsila omnyama omnyama - isigamu sesipuni;
ubisi - 200 ml.
Gcoba pepper kanye ne-turmeric bese uthele izinongo ngamanzi. Pheka inqwaba ebangela umlilo emaminithini angu-8, uvuselele njalo. Lungiselela unamathisele bese ubeka efrijini. Ukuphila kweShelf kungukusuku ezingu-30. Sishisa ubisi ngaphandle kokuyeka ukupheka. Engeza u-1 tsp kuwo. unamathisela kusuka ku-turmeric.
Ungathathi ubisi ne-turmeric ekuvinjeni kwe-biliary tract, ngoba le spice iyinhlangano ye-cholagogue ehle kakhulu. Kuvinjelwe ukuthatha uma uthatha imithi. Lokhu kungenxa yokuthi i-turmeric ikhulisa kakhulu imiphumela yezinye izinto.
Mumiye - ukwelashwa
I-anyanisi yama-Indian - i-vodka tincture
I-Sporish - izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
I-recipe ye-Tibet yebusha
Ukuqoqa isisu 3
Indlela yokwenza ama-oats ukuhlanza umzimba?
Ungathatha kanjani amafutha e-thistle?
AmaHops ama-cones - izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
I-Kotovnik - izakhiwo zokwelapha nokuphikisana
Amafutha abalulekile we-jasmine
I-Tui - i-homeopathy
Kungani abangane abadala bephupha?
Imvilophu yeposi lezandla zakho
I-Mango Coat 2013
I-Dandelion - izakhiwo eziwusizo nama-contraindications
I-dermatitis eluhlaza ezinja
Ugwayi onobuhle neklabishi
I-sodium chloride ngesikhathi sokukhulelwa
Indlela yokunquma iphethini yakho yombala?
Umthengisi we-Scotch tape
Igama elithi Varvara lisho ukuthini?
Ikati ngemuva kokumangalisa
Isobho nge meatballs kule multivark
I-Freezer esifubeni sekhaya
Igumbi lokuhlala ifenisha ngesitayela sokuqala